नेपाल सरकारसँग अनुमति नलिई संयुक्त राष्ट्रसंघले किन गर्‍यो यस्तो हर्कत ?
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाल सरकारसँग अनुमति नलिई संघीयता, पहिचान, जातीयताजस्ता राजनीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिने अतिसंवेदनशील विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको खुलेको छ । राष्ट्रसंघको नेपाल ...
नयाँ परिवर्तनले अग्रगामी विकासमा जान प्रेरित गरेको छ : राष्ट्रपति भण्डारी
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पहिलोपटक संघीय संसदमा संबोधन गरेकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले मुलुक अब कुनै पनि बहानामा हिंसातर्फ होमिन नहुने बताएकी छन् । ४१ प्रतिशत महिला सहभागिताले उत्सा ...
कारागारमा भिआईपी क्लव बनाउँदै गौचन हत्याका नाइके बस्नेत
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरद गौचन हत्याका मुख्य योजनाकार समिरमानसिंह बस्नेत अहिले नख्खु कारागारमा सजाय भोगिरहेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) ले ...
बर्जर पेन्टको ठगीले उपभोक्ता मारमा, पोखरामा अनुगमन
पोखरा । रङमा कालोबजारी गरेको गुनासो बढेपछि कास्की जिल्लास्थित बजार अनुगमन समितिले पोखराको बर्जर पेन्टको गोदाममा अनुगमन गरेको छ । उपभोक्ताहरुको गुनासो आएको भन्दै कास्की प्रशासनले स्थलगत अनुगमन ग ...
नयाँ सरकारकाे नयाँ काम : १० वर्षपछि बले काठमाडौंका ट्राफिक बत्ती
काठमाडौं । विगत लामो समयदेखि बल्न नसकेका राजधानीका ट्राफिक लाईट आजबाट बल्न शुरु भएका छन् । प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली नियुक्ति भएर नयाँ सरकार बनेसँगै नयाँ कामको शुरुवात भएको छ । महानगरि ...
उपत्यकामा स्मार्ट ट्राफिक लाइट
काठमाडौं । उपत्यकामा विगत लामो समयदेखि ट्राफिक बत्ति नहुँदा समस्या परिरहेको छ । सवारी साधन र पैदल यात्रुको सहजताका लागि राखिएका बत्तिहरु नबल्दा एकातिर पैदय यात्रुहरु समस्यामा थिए भने अर्कोतिर सवारी चा ...
अनलाईन नेटवर्किङको नाममा ठगी गर्ने दुई विदेशी प्रहरीको फन्दामा
२०७४ चैत्र १२ गते
काठमाडौं । अनलाइन नेटवर्किङको नाममा ठगी गर्ने दुई विदेशी नागरिक पक्राउ परेका छन् । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका अनुसार बंगलादेशी र भारतीय नागरिकले नेपालमा आएर विश्वमा नाम चलेको अनलाईन व्यपार गर्ने ...
लागूऔषध सहित शेर्पाद्धय पक्राउ
काठमाडौं । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले प्रतिवन्धित लागू औषध कारोवार गर्ने गिरोहलाई लागू औषध सहित पक्राउ गरेको छ । परिसरको टोलीले आइतबार नुर्फिन १०० थान , फेनारगन १०० थान र डाईयाजेपाम १०० थान सहित ...
चितवन । चितवनको पहिलो सरकारी अस्पतालको रुपमा परिचित भरतपुर अस्पताल नेतृत्वको कारण धरासायी बन्ने अवस्थामा पुगेको छ । अत्यन्त तीव्र गतिमा विकास भईरहेको भन्दै प्रचार गरिएको भरतपुर अस्पतालका मेसु ड ...
कार्डियन सर्च एण्ड स्वीप अप्रेशनमा ४६ जना फन्दामा
काठमाडौं । महानगरिय प्रहरी परिसर काठमाडौंले चलाएको ‘कार्डियन सर्च एण्ड स्वीप अप्रेशन’मा ४६ जना पक्राउ परेका छन् । प्रहरीका अनुसार शनिबार सुन्धारा र आइतबार कोटेश्वरमा चलाइएको अप्रेशनका क्रम ...
प्रधानमन्त्रीको घर राज्यमन्त्रीको क्वार्टर
काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका काभ्रेका गोकुल बास्कोटाले अहिलेसम्म कसैले नपाएको स्थान पाएका छन् । मन्त्री क्वार्टरमा ठाउँ खाली नभए ...
इयुको प्रतिवेदनप्रति प्रेस काउन्सिलको आपत्ति
काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालले युरोपियन युनियन निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसन, २०१७ ले जारी गरेको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभामा निर्वाचनको प्रतिवेदनमा काउन्सिलबारे नकारात्मक कुरा उल्लेख गरेकोप्रति आपत्ति जना ...
अबकाशको मुखमा आईजीपी र एआईजीहरु भोजभतेरमा ब्यस्त, एआइजीहरुले दिए तस्करलाई खुलेआम छुट
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा कार्यकाल सकिन बाँकी रहेका आइजीपी र एआइजीहरु भोजभतेरमा ब्यस्त रहेका छन् । आइजीपी प्रकाश अर्यालसहितका १५ एआइजी र २ डीआइजी यही चैत २८ मा अवकाश हुँदैछन् । अर्याल छोराको ब् ...
सुन पसलमा बम विस्फोट हुँदा ८ जना घाइते, गोइतले लिए जिम्मेवारी
२०७४ चैत्र ९ गते
काठमाडौं । सिरहाको लहान नगरपालिकाको वडा नम्बर ७ मा बम विष्फोट हुँदा ६ जना घाइते भएका छन् । स्थानीय विकास सारडाको सुन चाँदी पसलमा बम विष्फोट हुँदा ६ जना घाइते भएका हुन् । उनीहरुको स्थानीय सप्तऋषि हस्पि ...
अब विदेश गएका नेपालीले पनि मतदान गर्न पाउने
काठमाडौं । अब कामको शिलशिलामा विदेश पुगेका नेपाली नागरिकहरुले पनि निर्वाचनमा भाग लिन पाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका कामदारले पनि निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने गरि व्यवस्था मिलाउन सरकारल ...
शशस्त्रमा एआईजी खनालको के छ कार्य क्षमता ?
काठमाडौं । शशस्त्र प्रहरी बलमा सिनियर एआईजी भएका कारणले सैलेन्द्र खनाल आइजीपीका प्रमुख दाबेदार हुन् । तर, उनको एआइजी कार्यकालको कार्यसम्पादन र मूल्यांकन के छ भन्ने बारेमा अहिले प्रश्न उठ्न थाले ...
३३ केजी सुन काण्डमा मुछिए एसएसपी, गृहले बनायो छानविन समिति
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले तस्करीको साढे ३३ केजी सुन काण्डमा प्रहरीको शंकास्पद भूमिका देखिएको भन्दै अनुसन्धान गर्न डिआईजी पुष्कल रेग्मीको संयोजकत्वमा छानविन समिती गठन गरेको छ । गृह स्रोतक ...
काठमाडौंत ।रोबोट सोफियाले भोकमरी, भ्रष्टाचार, लैंगिक असमानता हटाउन टेक्नोलोजीले सहजता दिने बताएकी छन् । युएनडीपी र नेपाल सरकारको आयोजनामा बुधबार काठमाडौंमा सोफियाले भनिन ‘मेसिन र रोबोट तप ...
सञ्जय कुमार श्रेष्ठ २०७४ चैत्र ६ गते
सिन्धुली । मध्यनेपाललाई पूर्व जोड्ने छोटो मार्ग धरान–चतरा–गाईघाट–सिन्धुली–हेटौँडा सडक निर्माण सुस्त भएको भन्दै स्थानीयहरु आक्रोशित बनेका छन् । तीन वर्षभित्र निर्माण सक्ने ...
काठमाडौं । अस्थायी शिक्षकहरुले आजबाट पुनः आन्दोलन शुरु गरेका छन् । अस्थायी शिक्षक संघर्ष समिति र पुनरुत्थान समूह नेपालले आजदेखि पुनः आन्दोलन थालेका हुन् । अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गराउन शिक्षक सेवा आय ...
काठमाडौं । नेपालमा बढ्दै गएको उपभोक्तावादी संस्कृतिका कारण कुनै दिन युरोप र अमेरिकाको माटो समेत नेपाली जनतालाई स्वाद मानी मानी खान्छन् भन्दा अन्यथा नमाने हुन्छ । किनभने छिमेकी देश तथा विदेशका गुणस्तरह ...
कपिलवस्तु। राम्रो जागिर लगाइदिने प्रलोभनमा पारी बिचौलियाले भारत हुँदै तेस्रो मुलुक लैजान लागेको अवस्थामा यहाँको यशोधरा गाउँपालिकास्थित मर्जादपुर सीमा नाकाबाट आइतबार ६ युवतीको उद्धार गरिएको छ। विदेशमा ...
तनहुँ। तनहुँमा बस,ट्रक र माइक्रो बससँग जबर्जस्ती पैसा उठाउंदै हिंड्ने लुटेरा समुहका सदस्य लुट्दा लुट्दै पक्राउ परेका छन् । आज बेलुका व्यास नगरपालिका वडा ७ स्थित शेराटार भन्ने ठाउमा टोले गुण्डा तथा लु ...
उपराष्ट्रपतिमा पासाङ निर्विरोध
काठमाडौं । उपराष्ट्रपतिमा नन्दबहादुर पुन 'पासाङ'निर्विरोध भएका छन् । उनको यो दोश्रो कार्यकाल हो । पुनले आफ्नो कार्यकालमा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, अखण्डताका र संविधानको संरक्षण एव ...
बुहारीलाई मन्त्री बनाएरै छाडे प्रचण्डले, एमालेले पनि टुङ्ग्यायो मन्त्री
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बुहारी विना मगलाई मन्त्री बनाएका छन् । दाहालले विनालाई खानेपानीको जिम्मेवारी दिने गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नाम बु ...
हट्लान त आजबाट २० वर्ष पुराना सवारी ?
यदुनाथ बञ्जारा २०७४ चैत्र १ गते
काठमाडौं । सरकारले आजबाट देशभर २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारी गुड्न नपाउने नियम लगाएको छ। बीस वर्ष नाघेका सार्वजनिक यातायात चैत १ गतेपछि गुडेमा जफत गरी लिलाम गर्ने तयारी गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा याता ...
आफूलाई गोली हान्न आएकाको पेस्तोल खोस्दा गणेश लामा फन्दामा
काठमाडौं । आफूलाई गोली हान्न आएको व्यक्तिसँग पेस्तोल खोसेका नेपाली कांग्रेसका नेता गणेश लामा पक्राउ परेका छन् । दुई जना अज्ञात व्यक्तिले लामामाथि गोली चलाएपछि लामाले पेस्तोल खोसेका थिए । लामाले पेस्तो ...
न्यायालयमा अर्को तमासा, न्याय परिषद्का सचिवले देखाए रमिता
२०७४ फागुन ३० गते
काठमाडौं । न्याय परिषदका सचिवले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली उमेर हदका कारण पदमा नरहेको जानकारी गराएसँगै न्यायालयमा नयाँ तमासा खडा भएको छ । बुधबार नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सपथ खुव ...
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पदमुक्त भएका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले नै बेञ्च बहिस्कार गरेपछि नैतिक संकटमा परेका पराजुलीलाई न्याय परिषद सचिव नृपध्वज निरौलाले पदमा नरहेको भन्दै उनला ...
दुर्घटनाबारे जानकारी लिन उड्डयन मन्त्रीसहितको उच्चस्तरीय बंगलादेशी टोली काठमाडाैंमा
काठमाडौं । सोमबार त्रिभुवन विमानस्थलमा दुर्घटनामा परेको यूस बंगला विमान बारे जानकारी लिन बंगलादेशका नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्री एकेएम शाहाजहान कमालसहितको एक उच्चस्तरीय टोली नेपाल अार्इपुगेकाे छ । ...
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आज दिउसो दुर्घटना भएको विमानमा दुर्घटनामा परी २४ नेपालीसहित ४९ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुने नेपालीमा अधिकांश एमबीबीएसका विद्यार्थी रहेका छन् । एमबी ...
बोक्सीको आरोपमा लगातार ६ घण्टा कुटपिट गर्ने भोले बाबा छुटाउन भूमिका खेल्ने मेयरमाथि गोली प्रहार
काठमाडौं । कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाका मेयर ममताप्रसाद चोधरीमाथि गोली प्रहार भएको छ । उनलाई सोमबार साँझ मोटरसाइकलमा आएको अज्ञात समूहले गोली प्रहार गरेको हो । प्रहरीका अनुसार चौधरीको शरीरमा गोलीको छर ...
विमान दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या ४९ पुग्यो, २१ घाइते, एक बेपत्ता
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आज भएको यूएस बङ्लाको विमान दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या ४९ पुगेको छ भने २१ जना घाइतेको उद्दार भएको छ । ढाकाबाट काठमाडौं आएको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष ...
न्यायाधीशले बेञ्च बहिस्कार गरेपछि प्रधानन्यायाधीश संकटमा
काठमाडौं । प्रधानन्ययाधीश गोपाल पराजुलीको अवकाश गत साउनमै भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले पूर्ण इजलास बहिस्कार गरेका छन् ।अदालतको अवहेलनासम्बन्धी डाक्टर गोविन्द केसी र कान् ...
भाषण नभई एक्सनमा उत्रन प्रधानमन्त्रीलाई प्रचण्डको आग्रह
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई कठोर कदम चाल्न आग्रह गरेका छन् । संसद बैठकमा आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति विश्वासको म ...
विश्वासको मत लिँदै प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदैछन्। प्रधानमन्त्रीमा चयन भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ओलीले आज दिउँसो ३ बजे प्रतिनिध ...
काठमाडौं । नकेपा एमालेका नेता सुवास नेम्बाङको प्रस्ताव र माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा प्रतिनिधिसभा सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।सभामुखक ...
सभामुख बन्दै महरा
काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेता कृष्णबहादुर महरालाई सभामुख र वर्षमान पुनलाई पार्टीको जिम्मेवारी दिने योजना बनाएका छन्। एमालेसँगको भागबन्डामा सभामुख माओवादीको भागमा परेक ...
गृहमन्त्री र आईजीपीको तित्तताले प्रहरीको बढुवा रोकियो
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले नेपाल प्रहरी भित्रको समस्या बुझ्न नसक्दा प्रहरीको बढुवामा अन्यौल बढ्न थालेको छ । केही समय अघि प्रहरी प् ...
उपेन्द्रलाई रोक्न बालुवाटारमा राजपाका नेताहरुको ताँती
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारमा सहभागी हुन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको अध्यक्षमण्डल शीर्ष नेताहरूले भारतीय राजदूत मञ्जिभसिंह पुरीको सहयोग लिएको खुलासा भ ...
अब्बासीको नेपाल भ्रमणले भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ भित्र खैलाबैला
काठमाडौं । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री साहिद खकान अब्बासीको अचानक नेपाल भ्रमणले नयाँ दिल्लीमा भूकम्प गएको छ ।अब्बासीको नेपाल भ्रमणसँगै भारतीय गुप्तचर संयन्त्र नै फेल खाएको टिप्पणी हुन थालेको छ । ...
अब्बासीको कुटनीति सहि कि गलत ? विपक्षी दलका नेतालाई बेवास्ता
काठमाडौँ । नेपाल भ्रमणमा रहेका पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहीद खकान अब्बासीले नेपालको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेतासँग नेपाल भ्रमणमा आइपुग्दा समेत भेटने कार्यक्रम तय ग ...
ठगी धन्दामा हुण्डीको कारोबार,कडाइ गर्दै एसएसपी पोखरेल
काठमाण्डौं। प्रहरीले ठगी धन्दाको अनुसन्धान गर्दागर्दै तीन जना हुण्डी कारोबारीलाई पक्राउ गरेको छ । बेलायतबाट आफ्नो नामको महङ्गो उपहार दिल्ली हुँदै काठमाडौं आउन लागेको लोभमा ४६ लाख गुमाएका पवि क्षेत्री ...
प्रकाशमानलाई पराजित गर्दै देउवा संसदीय दलको नेता बन्न सफल
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा प्रकाशमान सिंहलाई पराजित गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भएका छन् । सिंहलाई २५ मतान्तरले पराजित गर्दै देउवा दलको नेता बन्न सफल भएका हुन । दे ...
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नेपाल आउनु र सलमान खानको कार्यक्रम स्थगित गरिनु संयोग मात्र हो ?
काठमाडौँ। नेपालको दुई दिने औपचारिक भ्रमणका लागि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शाहिद खकान अब्बासी अपरान्ह काठमाडौं आइपुग्दै छन्। दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) को शिखर सम्मेलन आयोजनाबारे उनी प्रधा ...
अबकाशको मुखमा आइजीपीले उचालेपछि एआईजीहरु ३० बर्षे अबधि हटाउने लबिङमा
काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा सरकारको पालामा ३० बर्षे सेवावधिका आधारमा अवकाश हुने प्रावधान खारेज गर्न योजनाबद्ध रुपमा लागेर पनि असफल भएका नेपाल प्रहरीका एआइजी र आइजीपीको समूह नयाँ सरकार आएपछि पुनः सक्रि ...
चार जना बाहेक प्रतिनिधिसभाका सबै सदस्यहरुद्वारा शपथग्रहण
काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले शपथग्रहण गरेका छन् । नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा आइतबार जेष्ठ सदस्य महन्थ ठाकुरले सांसदहरुलाई पद तथा गोपनियताको शपथग्रहण गराएका हुन् । निर्व ...
कान्तिपुर टोली सर्वोच्च पस्दा पत्रकारलाई प्रवेशमा रोक
काठमाडौं । अदालतको अवहेलना मुद्दामा बयानका लागि कान्तिपुरको टोली सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरे लगत्तै पत्रकारहरुलाई भने अदालत परिसर छिर्न रोक लगाइएको छ । अदालत सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीले प्रेस पास द ...
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदको शपथ आज हुँदै
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदको शपथ आज हुँदै छ भने दुवै संसद्को छुट्टाछुट्टै बैठक सोमबारबाट प्रारम्भ हुने भएको छ। अपराह्न ४ बजे प्रतिनिधिसभाको हलमा प्रतिनिधिसभाका सांसदले ज्येष्ठ सदस ...
प्रहरीद्धारा इयरगन सहित ६ थान बन्दुक बरामद्
जाजरकोट । प्रहरीले जाजरकोटको जुनिचाँदे गाउँपालिका–११ कोर्ताङ स्थित चन्द्रबहादुर शाहीको घरबाट भारी मात्रामा हतियारहरु बरामद गरेको छ । बाह्रबोर बन्दुक २ थान, भरुवा बन्दुक ३ थान, दुई नाले बन्दुक १ ...